သွပ်ရည်စိမ်ပြီး ချောမွေ့မှုမရှိသော သံမဏိပြား၊ ကွိုင်၊ ပိုက်၊ အထူးပုံသဏ္ဍာန် သံမဏိ- Lu သံမဏိ
အလတ်စား အထူ သံမဏိပြား
မော်တော်ကား beam steel coil
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း welded ပိုက်
သံမဏိ Scaffold Tubes
Hot roll ချောမွေ့သောစတီးပိုက်
ထူထဲသောနံရံ ချောမွေ့စွာ သံမဏိပိုက်
သေးငယ်သော ချောမွေ့သော သံမဏိပိုက်
ကြီးမားသော ချောမွေ့သော သံမဏိပိုက်
သတ္တုစပ် ချောမွေ့သော သံမဏိပိုက်
အအေးဆွဲ ချောမွေ့သော စတီးပိုက်
သွပ်ရည်စိမ်ထားသော အကွက်ဆင်ထားသော စတီးကွိုင်
Anchor Rod သံမဏိ
Hot dip သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင်
ပူပူနွေးနွေး သွပ်ရည်စိမ်ထားသော စာရွက်
ပူပြင်းလှသော stainless steel ပန်းကန်
Stainless Steel အထူးပုံသဏ္ဍာန်ပြွန်
အအေးခံထားသော သံမဏိကွိုင်များကို လှိမ့်ထားသော ကွိုင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အခန်းအပူချိန်တွင် ပြန်လည်စတင်သည့် အပူချိန်အောက်သို့ လှိမ့်ဆင်းသည်။ အအေးခံထားသော စတီးလ်များသည် စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အအေးခံထားသော သံမဏိသည် ပိုမိုပါးလွှာပြီး ပိုမိုတိကျနိုင်သည်။
ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ အထူးသံမဏိ၊
coated steel ထုတ်ကုန်စီးရီးလေးခု၊ သိုလှောင်မှုတန်ချိန် 10,000၊ အချိန်မရွေး ထိန်းချုပ်ရန်၊ စျေးကွက်အပြောင်းအလဲများကို တုံ့ပြန်ရန်၊ ပေးပို့ချိန်တို၊ အမြန်ပေးပို့ခြင်း၊ ထိရောက်ပြီး စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
အလတ်စားနှင့် အထူ စတီးပြား မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့သော ကား...
နိဒါန်း အလယ်အလတ် အထူ s...
အသားပေး မော်တာမဟုတ်သော စီလီကွန်စတီးကွိုင်၊
ညီမျှသောထောင့်သံမဏိ Q195 Q235 SS400 A36 တြိဂံ...
ခရုပတ်စတီးပိုက်အကြီးအချင်း ERW ချောမွေ့စွာ w...
နိဒါန်း အအေးလူး ဈ...
တရုတ်လက်ကား Galvanized Steel Coil - အလတ်စား...
ရောင်စုံစတီးလ် ကြွေပြား ကြွေပြားခင်း ကော်ဖတ်ဘုတ် ma...
မိတ်ဆက် Colour steel ti...
ခဲပြား ကွိုင်/ပန်းကန် အစားအသောက်တန်း သံဖြူပန်းကန်၊ အသုံးပြုသော...
Tinplate coil မိတ်ဆက်၊...
PPGI သံမဏိစာရွက်ကွိုင်အရောင် coated ကွိုင် manufac ...
PPGI စတီးလ် မိတ်ဆက်...
နိဒါန်း Hot dip g...
Shan Dong Lu steel Group Co.,Ltd သည် အထွတ်အမြတ်ထားရာ တောင်ကြီးငါးခုအနက် ပထမဆုံးဖြစ်သော ထိုင်ရှန်၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ဖြူးရှပ်၏မွေးရပ်မြေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ကျောသည် ရှန်ဒေါင်းမြို့၏နွေဦးမြို့တော်—jinan ဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်သည် ပင်လယ်ဝါ-qingdao ၏ကမ်းရိုးတန်းဖြစ်ပြီး အနောက်ဘက်တွင် တရုတ်၏မိခင်မြစ်—မြစ်ဝါမြစ်ရှိသည်။ မကြာသေးမီက လုပ်ငန်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် Lu၊ သံမဏိသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကြီးစားထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်လာသည်...
ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းနှင့် ချောမွေ့သောသံမဏိပြွန်၏ အားသာချက်
အခေါင်းပေါက် အပိုင်းပါသော ချောမွေ့သော သံမဏိပိုက်၊ ရေနံ၊ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ရေနှင့် အစိုင်အခဲ အနည်းငယ်သော ပိုက်လိုင်းကဲ့သို့ အရည်များကို ပိုက်လိုင်း သယ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အရွယ်အစား ကြီးမားသော ပိုက်လိုင်း။ သံမဏိပိုက်နှင့် ပတ်ပတ်လည် သံမဏိအစိုင်အခဲစတီးလ် ကွေးညွှတ်ခြင်း torsional strength အဆင့်နှင့် တူညီသောအချိန်တွင် burde...
ချောမွေ့မှုမရှိသော သံမဏိပိုက်ကို သင်မည်မျှသိသည်ကို ကျွန်ုပ်မသိပါ။ ချောမွေ့မှုမရှိသော သံမဏိပြွန်များသည် ပြင်ပအဆစ်များမပါဘဲ စက်ဝိုင်းပုံ၊ စတုရန်းနှင့် စတုဂံအခေါင်းပေါက်စတီးပြွန်များဖြစ်သည်။ ချောမွေ့မှုမရှိသော သံမဏိပြွန်ကို သွေးကြောမျှင်ပြွန်အတွင်းသို့ ဖောက်ထွင်းဖောက်ဝင်ခြင်းဖြင့် သံမဏိပိုက်ပေါက် သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲပြွန်တုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဲဒါ...
ဂဟေဆော်သော သံမဏိပြွန်များ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။
ဂဟေဆော်ထားသောပိုက်၊ ဂဟေဆော်ထားသောသံမဏိပိုက်ဟုလည်း ခေါ်သည် ၊ ဂဟေဆော်ထားသော သံမဏိပိုက်ကို ဖယောင်းတီးပြီး ပေါင်းထည့်ပြီးနောက် ပန်းကန်ပြား သို့မဟုတ် အမြှောင်းများ ၏ ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ဂဟေဆော်ထားသော သံမဏိပိုက်များ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းသည်၊ မြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှု၊ သတ်မှတ်ချက်များ အမျိုးအစား၊ စက်ကိရိယာ နည်းပါးသော်လည်း အလုံးစုံ ခိုင်ခံ့မှုသည် ချုပ်ရိုးများထက် နည်းပါးသည်...
ခရုပတ် welded သံမဏိပိုက်၏အပြောင်းအလဲနဲ့အရည်အသွေးသေချာအောင်ဘယ်လို
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် စျေးကွက်တွင် ခရုပတ်ဂဟေဆော်သည့်စတီးလ်ပိုက်သည် နိုင်ငံတော်စံနှင့် စံမဟုတ်သော အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပြီး၊ ကွဲပြားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရည်ညွှန်းအရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများ အပြောင်းအလဲကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို စက်ရုံတွင်း အရည်အသွေးမှာလည်း ကွဲပြားမှုများရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်...
Stainless Steel ပိုက်တွေကို ဘယ်လိုအမျိုးအစားခွဲမလဲ။
1. Stainless steel tubes များကို ကုန်ကြမ်းအလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားထားပြီး ၎င်းကို သာမန်ကာဗွန်သံမဏိပိုက်၊ အရည်အသွေးမြင့် ကာဗွန်ဖွဲ့စည်းပုံ သံမဏိပိုက်၊ အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ သံမဏိပိုက်၊ အလွိုင်းသံမဏိပိုက်၊ bearing steel pipe၊ stainless steel pipe၊ double metal composite pipe၊ coating ပိုက်ကို သိမ်းဖို့၊